सरकारका प्रवक्ताको कडा टिप्पनी : कांग्रेस दिनभर विपी रातभर विप्लव हो ? - Nepal's Digital News Paper
सरकारका प्रवक्ताको कडा टिप्पनी : कांग्रेस दिनभर विपी रातभर विप्लव हो ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्धित विप्लव नेकपालाई काखी च्यापेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आरोप लगाएका छन् । विहीवार मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले विप्लव नेकपाका गैरकानी कार्यमा कारवाही गर्दा कांग्रेस दुख्ने गरेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यालाई लिएर संसद अबरोध गरेको जनाउँदै मन्त्री बास्कोटाले नीतिमै अस्पष्ट रहेको बताए । कांग्रेस पछिल्लो समय नीतिमै अस्पष्ट रहेको बताउँदै भने, ‘कांग्रेस दिनभरि बिपी र रातभर विप्लव हो ?’
कांग्रेसले मृत्युको व्यापार गरेको आरोप समेत मन्त्री बास्कोटाले लगाए । सर्लाहीमा पौडेलका साथै भोजपुरमा विप्लव कार्यकर्ता र प्रहरी जवान मारिएको विषयमा समेत प्रतिपक्षबाट केही अप्ठ्यारा टिप्पणी आएको बताउँदै उनले शान्ति चाहने र हिंसा गर्नेलाई एकै नजरले हेर्नु प्रतिपक्षको दृष्टिदोष भएको बताए । कांग्रेसको चारताराबाट शान्ति र लोकतन्त्रका दुई तारा हराएको कटाक्ष समेत गरे।